ဝယ်ဂျမလား သုံးကျပ်တမတ်တန် Samsung ဖုံး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » ဝယ်ဂျမလား သုံးကျပ်တမတ်တန် Samsung ဖုံး
ဝယ်ဂျမလား သုံးကျပ်တမတ်တန် Samsung ဖုံး
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Feb 18, 2012 in Opinions & Discussion, U.S. News | 19 comments
အခုတလော မြန်မာ့သတင်းတွေမှာ ငါးထောင်တန် မိုဘိုင်းဖုံးသတင်းများ ဆူညံနေတာမို့ ဘယ်လိုတတပ်တအား ဝင်နှောက်ရမလည်း စဉ်းစားမိတော့ best buy အီလက်ထရောနစ်စတိုးမှာ လျော့ဈေးရောင်းနေတဲ့ ဆမ်ဆောင်းအမျိုးအစား အေတီအန်တီ လက်ကိုင်ဖုံးဆက်ကို တွေ့ပါတယ်။ တလုံး ၂.၉၉ဒေါ်လာ အရောင်းခွန်ပေါင်းပါမှ ၃ဒေါ်လာ၂၆ဆင့်န် ကျသင့်ပါတယ်။ ဖုံးထဲမှာ ဆင်းမ်ကတ်နဲ့ ဘက်ထရီ၊ ဘက်ထရီကြိုး ပါရှိပါတယ်။ သုံးချင်ရင်ဖုံးကို အက်တီဗိတ်လုပ်ပြီး ပိုက်ဆံကဒ် ဝယ်ယုံပါပဲ။ တမိနစ်ကို ဆယ်ဆင့်န်ပါ။ ပြည်တွင်းက ရွာသားများ မုဒိတာပွားနိုင်အောင်လို့ပါ။ အခြား စမတ်ဖုံးများကတော့ ဈေးလည်းမချို၊ ပြီးတော့လည်း ဒေတာသုံးကြေးပေးရမယ့်အပြင် ၂နှစ်စာချုပ်ပါချုပ်ရမှာဖြစ်လို့ ပြောမပြတော့ပါဘူး။ ဖုံးအမျိုးအစားနဲ့ အချက်အလက်များကို အောက်မှကြည့်ကြပါ။ ပြည်တွင်းမှာ သုံးရမရ ပညာရှင်များ ဖုံးဖရီကွင်န်စီကို ကြည့်ရင်သိပါလိမ့်မယ်။ တခုတော့ရှိတယ် ယူအက်စ်ကဖုံးတွေက ကွန်ပြူတာနဲ့ချိတ်ဖို့ UBS မပါလို့ အင်တာနက်တော့ သုံးလို့မရဘူး..။
this mobile phone that features Internet accessibility and text and instant messaging. A speakerphone lets you have hands-free conversations.
AT&T GoPhone Samsung A107 No-Contract Mobile Phone
Lets you communicate by typing. Instant messaging allows you to keep in touch with your IM friends.
Internet access and browsing
Let you access the Web (additional fees may apply).
Operates on dual-band GSM/GPRS Class 10 850/900/1800/1900MHz networks so you can access the Web.
Lets you store your contact numbers.
Up to3hours talk time and 10 days standby
Warranty Terms – Parts 1 year
Warranty Terms – Labor 1 year
Product Height 3-1/2″
Product Width 1-3/4″
Product Depth 7/8″
Band and Mode – Dual-band GSM, GPRS Class 10
Technology Details – GSM 850/900/1800/1900MHz
Standby Time – Up to 10 days
Customizable Ring Tones – No
Voice Activated – No
Speed Dialing -Yes
Color Display – Yes
Internet/Email Capable – Yes
Built-in Digital Camera – No
Text Messaging/Instant Messaging – Yes
QWERTY Keyboard – No
MP3 Playback Capability – No
Graphics – No
Downloadable Ringtones – Yes, polyphonic
Changeable Faceplate – No
External Caller ID – Yes
Phonebook – Up to 1,000 entries
Service Provider – AT&T GoPhone
Product Model – A107
Handset Type – Basic
UPC – 635753487893
သားဆီမှာ ဆမ်ဆောင်းဖုန်း ပျက်နေတာလေး တစ်လုံးရှိနေလို့ ၊ အဲဒါ ဦးကြောင် ဖုန်းပြင် ပေးမလားဟင် ။
မြန်မာပြည်ကို တင်ပို့နိုင်ရင် မီလီယမ် ဘိဇိနက် ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော် …
သုံးကျပ်တစ်မတ်ထဲပဲ ကိုကြောင်ကြီးရယ်….။ ကျွန်တော့ဖို့ တစ်လုံးလောက်ဝယ်ပို့လိုက်ပါ့လား လက်ဆောင်ပေါ့…။ ဒါမှမဟုတ်လည်း မြန်မာပြည်ပြန်လာတော့ ပိုက်ဆံယူ ပေါ့…….။ နော့……… သုံးလို့ရရ မရရဗျာ ဒါ US က ပို့လိုက်တာဆိုပြီး လိုက်ကြွားချင်လို့ ပါ………။
ဆိုတော့ ဒီမှာသုံးလို့ ရမယ်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ။
သူကြီးကို မြန်မာ နယူးရီးယား လက်ဆောင်ပို့ပေးပါ ဆိုပြီး ၀ိုင်းဝယ်ခိုင်းကြရအောင် .. :grin: :grin:
ကဲ- ဘာပဲပြောပြော အချိန်သိဖို့ထက် နာရီရှိဖို့ အရေးကြီးတယ်။
သုံးရရ မရရ ၂.၉၉ $ နဲ့ရရင် ၀ယ်ပြီးခါးချိတ်ထားလိုက်။
ယူအက်စ က မိတ်ဆွေပို့လိုက်တယ်လို့လိုက်ကြွား။
လူအထင်ကြီးခံရလဲ မနည်းဘူး။ ;)
အစမ်းဝယ်ကြည့်လိုက်တာ.. တလုံး Tax+ S&H ပါပြီး.. Subtotal: $9.81 ပြနေတယ်..။
သုံးမရရင်တော့.. မတန်ဘူး..။ အဲဒါလေး…။
လူကြုံရှိရင် ပို့ပေးလိုက်ပေါ့.. ဒီက လူ တယောက်ယောက်က စမ်းကြည့်လို့ အဆင်ပြေရင် မီလျှံ ဘစ်ဇနပ် ပဲ..
ရွာထဲမှာ မင်းသားမဲ ဆိုတာ ရှိဖူးတယ်လေ.. ဖုန်းဆိုင် ဖွင့်ထားတာ.. ဖုန်းနဲ့ ပတ်သတ်တာတွေ တင်တယ်။ အခု ဘယ်ပျောက်နေလဲ မသိဘူး။ သူ ရှိရင်တော့ သိမှာပဲ
$14.99 နဲ့.. အခွန်ဘာညာတွေထည့်ပြီး ၂၀ကျော်နဲ့ဈေးတက်သွားပြီဖြစ်ပါကြောင်း…
အနိစ္စအမြဲမရှိလို့ လွဲမပြောပါနဲ့ ယူတော့ဘူးဗျာ။ဟင့် ဟင့်
သူကြီးက ရွာသားတွေအတွက် တကယ် ဝယ်ပေးတော့မယ်တဲ့ ။
သူကြီးရေ ကျွန်တော် အမှတ် မမှားရင် မြန်မာ နိုင်ငံမှာ သုံးတာ GSM 900 ပါ ။
ဒီဖုန်း သုံးလို့ရမယ် ထင်ပါတယ် ။ ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေ ဝင်ပြောကြပါအုန်း ။
သူကြီးတို့က အမေရိကန် မှာနေရတာ သိပ်ကံကောင်းတာပဲ ။
ကုန်ဈေးနှုန်း နှင့် ပါတ်သက်ရင် ၊ အရာရာတိုင်းလောက်မှာ ၊
သြဇီက အမေရိကားထက် ၂ ဆ လောက်နီးနီး အမြဲဈေးကြီးနေတယ် ။
Luxury Car တွေဆို ၂ ဆ တောင်မကဘူး ၊ ၃ ဆ လောက် ဈေးပိုကြီးနေတယ် ။
သိပ် မသုံးနိုင်ဘူးပေါ့ ။ အရမ်း ဝမ်းနည်းတယ် ။
အမေရိကားကို လာလည်ဖြစ်မှပဲ တဆုံး ဝယ်ပစ် ၊ စားပစ် လိုက်မယ်။
Service Provider = AT&T Go Phone ဆိုတော့
မြန်မာပြည်မှာသုံးလို့ရဖို Unlock ပြန်လုပ်ရမယ်ထင်တယ် ။
ငါးထောင် တစ်သောင်းလောက်တော့ ထပ်ကုန်လိမ့်မယ် ။
ဖုံးအကြောင်း သေသေချာချာတော့ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် အသိတစ်ယောက် ယူအက်စ ဖုံးဟန်းဆက်တွေယူလာပြီး ဒီမှာ Unlock လုပ်မှ ရမယ်ဆိုပြီး လိုက်လုပ်တာ ဘယ်မှာမှ မရဘူး။
သဂျီး….အစောပိုင်းကအထိတော့ store pickup လုပ်ခွင့်ပေးတယ်။ အခုရတော့ဘူးထင်၏။ အလုံးရေ များများဝယ်မယ်ဆိုရင် ရှစ်ပင်းဖိုးမျှခံသာမယ်ထင်တယ်။ ဘယ်နှစ်လုံးစာအထိ ရှစ်ပင်းဖိုး ပုံသေထားပေးမလဲ မသိဘူး။ များရင် ကပ်စတန်မာဆားဗစ်နဲ့ ညှိကြည့်ပေါ့…။ ဝယ်ဖြစ်မယ်တော့ မထင်ဘူး…ဒီဖုံးရောင်းနေတာ တပတ်နီးပါးရှိပြီ၊ ဘယ်နှစ်ရက်ဆက် on sale ထားမှာမိုလို့လည်း….
အန်တီမမ..အဲဒီဖုန်းက ရိုးရိုးဆင်းမ်ကတ်ဖုံး ဖြစ်လို့ unlock လုပ်စရာ မလိုထင်ပါတယ်။ အသိတဦးဝယ်သွားဖူးတာတော့ (အခြားဖုံး) ဒီမှာတင် ဖုံးကို activate လုပ်သွားတယ် (အခု အင်တာနက်ကနေ ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရနေပြီ။ activate လုပ်တာနဲ့ ဖုံးကတ်ဝယ်တာ တခြားစီထင်တယ်၊ အဲသလိုဆို ဖုံးကတ်ဖိုးထပ်မကုန်ဘူး) မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တော့ ဆသရ ဆင်းမ်ကတ်ပြောင်းသုံးတယ်။ ဘီယာဖိုးတော့ ပေးရမယ်ထင်တယ်…။
ယူအက်စ ကဖုန်ေးတွေသုံးချင်လို့ဦးလေးပြန်လာတိုင်းသူပါလာတာတွေသုံးကြည့်ဖို့ခဏခဏကြိုးစားဖူးတယ်။ မရပါဘူး။ ဘန်ကောက်မှာထိပဲသုံးလို့ရတယ်။ အဲတော့လဲဒီမှာရှိတာပဲဝယ်သုံးလိုက်တယ်။ ဒါလဲရဖို့မသေ ချာဘူး။ Unlock လုပ်ဖို့လဲကြိုးစားကြည့်တယ်။ မရဘူး။ သုံးချင်ရင်တော့တခုရှိတာကတော့ ဘန်ကောက် ယူသွား။ အဲမှာ Unlock လုပ်။ ပြီးမှဒီယူလာ။ အဲဒါဆိုရင်တော့သိပ်အကောင်းကြီးတော့ မဟုတ်ပေမဲ့သုံး လို့တော့ရပါတယ်။